रामकुमारी झाँक्री फेरी भाइरल, श्रीमान् बने कारण — Imandarmedia.com
१अन्तरिक्षमा गल्फ खेल्ने यात्रामा जापानी अर्बपति
काठमाडौ। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री चर्चामा आइरहन्छिन् । झाक्री फेरि एकपटक चर्चामा आएकी छन् । उनले आफ्नै श्रीमानलाई दिएको निर्देशनको कारण चर्चामा आएकी हुन् । देउवा सरकारमा रामकुमारी झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनिन् ।
उनी मन्त्री बनेकै मन्त्रालयमा उनका पति पनि छन् । उनी उपसचिवका रुपमा सोही मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनले अहिले सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । सहरी मन्त्रालयमा उनको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा छन् पति पशुपति पुरी ।
तैपनि विचार र सिद्धान्त मिलेपछि पशुपति र रामकुमारीको चिनापर्ची भएको ५ वर्षपछि अर्थात् २०६६ माघ २९ गते विवाह भयो । पुरी अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उपसचिवको रुपमा कार्यरत छन् । उनी धनकुटावासी हुन् भने झाँक्री गुल्मीकि हुन्।
यसैगरि , योगेश भट्टराई, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री एमाले विभाजनपूर्व माधवकुमार नेपालको समूहमा थिए । एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्नु केही पहिला गणेशकुमार पहाडी बालुवाटार प्रवेश गरे । उनलाई ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाए । एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा योगेश भट्टराई बालकोट पुगे र एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो साथ रहेको बताए ।
यता रामकुमारी झाँक्री भने माधवकुमार नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोग पुगिन् र नेकपा (एस) दर्ता गराइन् । त्यसै पार्टीविरुद्ध पछिल्लो समय एमाले आयोगदेखि अदालत हुादै सभामुख सापकोटाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि योगेश र गणेश कुराकानी गरिरहेको ठाउँमा रामकुमारी पुगिन् । जहाँ उनीहरूले तस्बिर खिचाए र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूहरूलाई अनधिकृत भन्दै खगराज अधिकारीलगायतले लगाएको नाराले हाँसोसँगै रिस पनि उठेको रामकुमारीले बताइन् । योगेशले ठट्यौली गर्दै थपे, ‘कोल्याप्स गरिदिउँ लाग्यो कि क्या हो ?’ त्यसमा रामकुमारी सही थपिन, ‘हो कोल्याप्स नै गरिदिउँ जस्तो लाग्यो ।’
त्यसपछि पत्रकारहरूले प्रश्न गर्‍यौं– न त रामकुमारीहरूलाई पदमुक्त गर्न भनेर नारा लगाउनुभयो न ढ्यापढ्याप गर्नुभयो किन ? योगेशले इशारा गर्दै जवाफ दिए, ‘मनबाट आउनुपर्‍यो त्यसपछि दिमागमा सन्देश जानुपर्‍यो र हातसम्म सन्देश पुग्नुपर्‍यो । अहिले त्यस्तो मनमा नै लागेको छैन ।
’यसै गरि मन्त्रि रामकुमारी झाँक्रीले संसदका ‘हत्यारा’हरूले आफूहरुलाई गैरसांसद भन्नुमा कुनै आश्चर्य नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले एमालेको चरित्र र औकात अनुसारको व्यवहार संसद्‌मा देखाएको आरोप लगाइन्।
‘यस्ता स्तरहीन चरित्रका विषयमा प्रतिक्रिया दिन मन छैन’, उनले भनिन् ‘उहाँहरुको औकात अनुसार काम गर्नु भएको छ।’ बहुमतको सरकार ढालेर बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीले खाँबो चिथोरिरहेको झाँक्रीको टिप्पणी छ। उनले भनिन्,‘खड्कप्रसाद ओलीको चाहनाले त यत्तिको उभिनु पनि दिनु हुने थिएन। उहाँको चाहनाले मात्रै नहुँदो रहेछ।’
विधिसंगत तरिकाले सभामुखले सदन चलाउने उनले बताइन्।‘उहाँहरुले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चरित्र गैरराजनीतिक चरित्र हो’, झाँक्रीले थपिन् ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई लागेको भए हामीलाई धर्तिमा बाँच्न नदिने थियो होला नि ! त्यो सम्भव छ र ?’ सरकारमा कहिले जानेरु भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले आजदेखि संसद्‌मा सत्तापक्षको रोमा बसेको र सरकारका जाने कुरा पार्टीले निर्णय लिने बताइन्।
अन्तरिक्षमा गल्फ खेल्ने यात्रामा जापानी अर्बपति